Sauvignon Blanc - Amagilebhisi - Iningizimu Afrika
I-Sauvignon blanc ikhiqiza iwayini elimhlophe nge-flavour eluhlaza kanye ne-herbaceous. Leli gama lisho "umhlophe omhlophe" ngesiFulentshi kanti ezihlukahlukene zikholelwa ukuthi ziyinzalo yomndeni wakwaTramer. Ngenye yezinhlobo ezitshalwe kakhulu kunazo zonke emhlabeni.
Ikhulile eFrance kusukela ngekhulu le-18 futhi yaziwa ngokuthi iyisebenzisayo emavinini aseBordeaux naseLouire Valley.
Iyaziwa njengeFerigentraube eJalimane, uMuskat Silvaner e-Austria, uFumé Blanc e-United States, uSouvignon eCyprus, ePortugal, e-Italy, eCzech Republic, eSlovakia naseSlovania naseSauvignon Gros eRomania.
Akuqinisekisiwe ukuthi uSouvignon blanc wangena eNingizimu Afrika, kodwa nakanjani watshalwe eGroot Constantia ngasekupheleni kwawo-1880. Ikhwalithi empofu yokutshala impahla yabangela eziningi zalezi zivini zivuthwa ngawo-1940. Lezi zinhlobonhlobo zathola ukuthandwa kakhulu ngawo-1970, lapho izinto ezingenawo igciwane zatholakala kwi-Agricultural Research Centre e-Nietvoorbij. Namuhla, ingenye yezinhlobonhlobo ezinhlanu ezitshalwe kuleli zwe.
Imivini ikhula kahle emhlabathini ophakathi nendawo ezindaweni ezipholile. Ikhiqizwa kuzo zonke izindawo ezikhiqiza iwayini eNingizimu Afrika, kanye nokubalwa kweStellenbosch endaweni enkulu ngaphansi kokukhiqizwa, kulandelwa uRobertson, iSwartland neWorcester. Kuyinto ehlukahlukene kunazo zonke ezitshalwe eCape South Coast.
Izinhlobonhlobo zingumlingisi olinganiselayo, onamandla okukhiqiza ama-9 t/ha kuya ku-13 t/ha.
Amagilebhisi avuthwe kusukela ekuqaleni konyaka, phakathi no-Febhuwari.
Amajikijolo kukhona umbala ophuzi okwesibhakabhaka, ophakathi nendawo encane futhi omfushane oval omile. Isikhumba sincane futhi sincane, kanti inyama iyinambitheka enomuncu ohlukile ohlaza.
Amahlamvu anombala omnyama, ophakathi nendawo encane, ojikelezayo nohlanu.
Izinhlobonhlobo zitholakala kalula ngomoya ophansi kanye nomkhuhlane we-powdery. Kuyinto enamathele ku-botrytis, ikakhulukazi emhlabathini ovundile, njengama-bunches abe eseqhamuka kakhulu. Kujwayele ukulimala kwesithwathwa futhi kudinga ukushisa okupholile kunabo bonke izinhlobo ngesikhathi sokuvuthwa.
Iningi lamawayini ase-Sauvignon blanc ayi-unwooded. Ama-Blend ne-Sémillon athandwa ngokukhethekile. I-Sauvignon blanc ene-Botrytis enegciwane lesetshenziselwa ukukhiqiza iwayini elimnandi elivuthiwe.
I-Sauvignon blanc ekhiqizwa ngaphansi kwezimo ezifudumele zezulu izakhiqiza iwayini elinama-flavour of izithelo ezishisayo neziphuzi, kanti izimo zezulu ezipholile zikhiqiza iwayini elinamathe amnandi futhi anomsoco, njengotshani, i-asparagusi namakhiwane aluhlaza.